Leafting Aluminum Paste-Busy ကိုမေလတွင်တင်ပို့!
21-05-05 အပေါ် admin ရဲ့အားဖွငျ့ဖွစျသညျ
မေလအားလပ်ရက်သည်စော။ အဆုံးသတ်သွားပြီး Henan Haofeng Aluminum Technology Development Company သည်အလုပ်စတင်ခဲ့သည်။ ယနေ့တွင်ဝယ်ယူသူ၏တောင်းဆိုချက်အရအလူမီနီယမ်ငွေငါးပိ ၁၅ တန်ကိုချေးဆေးတိုက်ဖျက်ရန်အထူးထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်ဟောင်းများ၏ယုံကြည်မှုသည်အမြဲတမ်း ...
aluminium silver paste ၏အသုံးပြုမှုစွမ်းရည်ဖော်ပြချက်
21-03-31 အပေါ် admin ရဲ့အားဖြင့်
သတ္တုရောင်ခြယ်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သော aluminium silver paste သည်အခြားသာမန်ဆိုးဆေးများနှင့်မတူသောအထူးသက်ရောက်မှုများကိုထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ ရေအခြေခံသောအလူမီနီယမ်ငွေငါးပိအသုံးပြုခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်နည်းစနစ်အချို့ကိုအတိုချုပ်ရှင်းပြပါမည်။ ကျေနပ်လောက်သောအထူးအကျိုးသက်ရောက်မှုများရရှိရန်အတွက်အလူမီနီယမ်ငွေအတိတ် ...
တနင်္လာနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် Hebei ရှိ Mr. Zhang သို့ရောက်ရှိရန်စီစဉ်သည်
21-03-12 အပေါ် admin ရဲ့အားဖြင့်
21-01-26 အပေါ် admin ရဲ့အားဖြင့်
အာဂျင်တီးနားသည်“ ဓာတုပစ္စည်းများစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေ” မူကြမ်းကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၁ ဇွန်လ ၁၃ ရက်တွင်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ရေရှည်တည်တံ့သောဖွံ့ဖြိုးရေး ၀ န်ကြီး Mediio Ambiente y Desarrollo Sostenible သည်မူကြမ်းမူကြမ်းကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ riesgo de sustanciasquÃmicasâ ??? (အမျိုးသားဓာတုပစ္စည်း Ris ...
ထွန်းသစ်စ flux စျေးကွက်ထွန်းသစ်စကစားသမားနှင့်အတူကြီးထွားဖို့အခန်းတစ်ခန်းရှိသေးသည်
21-01-20 အပေါ် admin ရဲ့အားဖွငျ့ဖွစျသညျ
ကမ္ဘာကြီးသည် COVID-19 နှင့်ဆက်လက်ဆက်လက်ဆက်ဆံနေပြီးစီးပွားရေးသည်ဆုတ်ယုတ်ကျဆင်းနေသည်နှင့်အမျှအမျိုးမျိုးသောဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများကြောင့်ဥရောပနှင့်အမေရိကန်နိုင်ငံများ၏ဂျီဒီပီသည်ဒုတိယသုံးလပတ်တွင်သမိုင်းဝင်ကျဆင်းသွားသည်။ နှစ်စဉ်နှုန်းအရအမေရိကန်ဂျီဒီပီသည်တစ်လနှင့်တစ်လ ၃၂.၉% ကျဆင်းခဲ့သည်။
၂၀၂၂ ခုနှစ်တွင်စက်မှုလုပ်ငန်း၏ဝေစု၊ ပမာဏနှင့်ကြီးထွားမှုအလားအလာများကိုအသေးစိတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည်
21-01-13 အပေါ် admin ရဲ့အားဖြင့်
ပထဝီအနေအထားအပေါ် အခြေခံ၍ ကမ္ဘာ့အလူမီနီယံခြယ်ပစ္စည်းစျေးကွက်ကိုမြောက်အမေရိက၊ ဥရောပ၊ အာရှပစိဖိတ်၊ လက်တင်အမေရိကနှင့်အရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့်အာဖရိကဒေသ ၅ ခုခွဲထားသည်။ ၎င်းတို့အနက်မြောက်အမေရိကသည်စျေးကွက်ရှယ်ယာအများဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဆက်မပြတ်ကြီးထွားမှုကြောင့် ...
အလူမီနီယမ်အမှုန့်စျေးကွက်အရွယ်အစား၊ ၂၀၂၁ တွင်တိုးတက်မှုအခွင့်အလမ်းများမျှဝေခြင်း၊ ထုတ်လုပ်သူများ၊ ဒေသများ၊ အမျိုးအစားများနှင့်လျှောက်လွှာမောင်းသူများ၊ ၂၀၂၄ ခုနှစ်တွင်ခန့်မှန်းသုံးသပ်ချက် | စျေးကွက်အစီရင်ခံစာကမ္ဘာကြီးကဆိုသည်
၂၀၂၀ ခုနှစ်“ လူမီနီယမ်အမှုန့်စျေးကွက်” ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းအစီရင်ခံစာသည်စီးပွားရေးမဟာဗျူဟာများနှင့်အခြေခံစစ်ဆေးမှုများအတွက်လျင်မြန်သောသတင်းအချက်အလက်များ၏အရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်။ အလူမီနီယမ်အမှုန့်စီးပွားရေးစစ်ဆေးမှုများအတွက်တိုးတက်မှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အမြတ်အစွန်း၊ ဝင်ငွေ၊ အမှန်တကယ်ထုတ်လုပ်မှု ...
21-01-04 အပေါ် admin ရဲ့အားဖွငျ့ဖွစျသညျ
Thermite သည်နှစ်ဖက်စလုံးပါသောဓားဖြစ်သည်။ အလူမီနီယမ်သည်စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆရှိပြီးကြီးမားသောအပူကိုရရှိရန်ကြိုးစားသည်။ ၎င်းသည်ရထားလမ်းများဂဟေများအတွက်အလွန်သင့်တော်သည်။ သို့သော်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ပိုမိုကျွမ်းကျင်မှုလိုအပ်သည်။ အသစ် 3D ပုံနှိပ်ခြင်းအပူနည်းလမ်းသားရဲကိုသာယဉ်စေနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အများစုသည်လုံခြုံစွာထိုင်ကြသည်။
PC စိတ်အားထက်သန်သူတိုင်းသည်သူတို့၏ကွန်ပျူတာ၏ပရိုဆက်ဆာအပူချိန်ကိုတတ်နိုင်သမျှနိမ့်ကျစေလိုသည်။ ကောင်းပြီ၊ ၎င်းသည်လုံးဝလိုအပ်သည်၊ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် CPU သည်၎င်း၏သက်တမ်းကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းလိုပါကအလွန်ပူပြင်းစွာမလည်ပတ်သင့်ပါ။ ယနေ့စျေးကွက်တွင်ရောင်းချသည့်ပရိုဆက်ဆာများနှင့်အတူအစက်အပြောက် CPU ကိုအအေးများသည်စျေးမကြီး။ ...
ကူးပြောင်းနိုင်သောမှင်များစျေးကွက် ၂၀၂၀ - ၂၀၃၀: ခန့်မှန်းချက်များ၊ နည်းပညာများ၊ ကစားသမားများ - IDTechEx
Changyuan ကောင်တီ Zhangxi ကျေးရွာ
အမှတ်အသားများ (Tags) - Hot ထုတ်ကုန်များ - Sitemap